ကာလဝမ်းရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ကာလဝမ်းရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Cholera vaccine)သည် ကာလဝမ်းရောဂါကို ကာကွယ်ရာတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပထမ(၆)လအတွင်းတွင် (၈၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး ပထမတစ်နှစ်တွင် (၅၀-၆၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။ (၂) နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းအောက်သို့ ကျဆင်းသွားသည်။ လူထုတစ်ရပ်အတွင်းရှိ သိသာထင်ရှားသော လူဦးရေပမာဏကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြီး အုပ်စုလိုက်ခုခံအားရရှိခြင်း(herd immunity)ဖြင့်လည်း ၎င်းလူထုအတွင်းရှိ ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသောလူများကိုပါ ကာကွယ်နိုင်သည်။ ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိသူများတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို အခြားဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်၍ အသုံးပြုသင့်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဤကာကွယ်ဆေးကို သောက်ဆေးအနေဖြင့် (၂)ကြိမ် သို့မဟုတ် (၃)ကြိမ်သောက်သုံးရန် အကြံပြုထားသည်။ ထိုးဆေးအနေဖြင့် အချို့နိုင်ငံများတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။
သောက်ဆေး(၂)မျိုးရှိပြီး (၂)မျိုးလုံးမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ချရသည်။ ဗိုက်အနည်းငယ်နာခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများနှင့် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသူများတွင် စိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို နိုင်ငံပေါင်း(၆၀)ကျော်တွင် အသုံးပြုရန် လိုင်စင်တင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကာလဝမ်းရောဂါအဖြစ်များသောနိုင်ငံများတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို အသုံးပြုခြင်းသည် ကုန်ကျမှုနည်းပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုအများအပြားရှိသည်။
ကာလဝမ်းရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်သည့် ပထမဆုံးဆေးကို (၁၈၀ဝ) ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းဆေးမှာ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ပြုလုပ်သော ကာကွယ်ဆေးများထဲတွင် ပထမဆုံးကျယ်ပြန့်စွာသုံးခဲ့သော ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။ သောက်ဆေးအနေဖြင့် (၁၉၉၀) နှစ်ပိုင်းတွင် ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ကာလဝမ်းရောဂါကို ကာကွယ်ရန် (ဝ.၁-၄.ဝ) ဒေါ်လာခန့် ကုန်ကျသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ "Cholera vaccines: WHO position paper." (Mar 26, 2010). Weekly epidemiological record 13 (85): 117-128. PMID 20349546.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Graves PM, Deeks JJ, Demicheli V, Jefferson T (2010). "Vaccines for preventing cholera: killed whole cell or other subunit vaccines (injected)". Cochrane Database Syst Rev (8): CD000974. doi:10.1002/14651858.CD000974.pub2. PMID 20687062.
↑ Sinclair D, Abba K, Zaman K, Qadri F, Graves PM (2011). "Oral vaccines for preventing cholera". Cochrane Database Syst Rev (3): CD008603. doi:10.1002/14651858.CD008603.pub2. PMID 21412922.
↑ Stanberry၊ Lawrence R. (2009)။ Vaccines for biodefense and emerging and neglected diseases (1 ed.)။ Amsterdam: Academic။ p. 870။ ISBN 9780080919027။
↑ "Post-licensure deployment of oral cholera vaccines:asystematic review." (1 December 2014). Bulletin of the World Health Organization 92 (12): 881–93. doi:10.2471/blt.14.139949. PMID 25552772.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကာလဝမ်းရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=718798" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။